Madaxweyne Xasan: Casharka Aan Ka Baran Karno C/risaaq X. Xuseen Waa Midnimada Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, 07 Febraayo 2014 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeybgalay aaskii qaran ee loo sameeyey Ra’iisul Wasaarihii hore Marxuum Cabdirisaq Xaaji Xuseen oo maanta lagu aasay Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa hoggaaminayey mas’uuliyiin kuwaas oo meydkii ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Mas’uuliyiintaas oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Hoggaamiyaha Jubba Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe), Wasiiro, Xildhibaanno iyo mas’uuliyiin hore.
Madaxweynaha ayaa yiri “Maanta waxaan EEBBE u baryeynaa mid ka mid ah geesiyaasheena. Cabdirisaq Xaaji Xuseen waxuu ahaa nin aad noogu weyn oo waddani ah. Waxuuna tusaale u yahay Soomaalida oo dhan una baahan in lagu daydo si aan dalka dib ugu dhisno. Haddii ay jirto cashar aan ka baran karno waxaa noqoneysa sida uu ugu dadaali jirey midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan shaki iiga jirin haddii aan gacmaha is wada qabsano inaan wax badan oo guulo ah aan gaari karno. Waana inaan midownaa oo aan ka gudubnaa sanooyin badan oo khilaaf ah.”
Madaxweynaha oo ka hadlayey guulihii Cabdirisaaq Xaaji Xuseen ayaa sheegay: “Cabdirisaaq waxuu ahaa shaqsi u istaagay cirib tirka musuqmaasuqa, maamul wanaag iyo inuu u adeego shacabka Soomaaliyeed, tanoo noo wada aheyd mid aan tusaale ka dhigan karno oo aan ku dayankarno dadaalkii uu sameeyey. Waana inaan ku wada xasuusanaaoo uu tusaale noo wada noqdaa. Bacdamaa uu geeriyooday, laakin taariikhdiisii fiicneyd wey nala joogtaa oo ma hilmaameyno.”
Madaxweyne Xasan ayaa tilmaamay in aaska C/risaaq Xaaji Xuseen ay uga faa’iideysanayaan in umadda Soomaaliyeed quluubta isu furto oo laga shaqeeyo in horay loo wada dhaqaaqo.
Raysul wasaarihii hore ee Soomaaliya C/risaaq Xaaji Xuseen ayaa maanta oo jimce ah lagu aasay deegaanka Ceel Carfiid oo uu horay ugu aasnaa madaxweynihii ugu horeeyey ee Soomaaliya Aadan Cabduule Cusmaan (Aadan Cadde).